Grade6A picnic on the beach by sfj putet English | Free Listening on SoundCloud
Grade6A picnic on the beach
by sfj putet English
published on 2012-11-26T06:28:06Z
Strategy First Institute၊ ယင်းမာတေးသံသွင်းနှင့် putet.com.mm တို့မှ ပူးပေါင်းစီစဉ်ပါသည်။ အမေရိကန် ဆရာ Marc Gaulier မှ အသံသွင်းထားပြီး၊ ကိုမြတ်မင်း စတူဒီယိုတွင် အသံဖမ်းပါသည်။ မြန်မာ့ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် ပုဂ္ဂလိကဏ္ဍမှ တစ်ဘက်တစ်လမ်းမှ ပါဝင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံ ပညာ အတန်းအလိုက် အင်္ဂလိပ်စာဖတ်စာအုပ်များကို အမေရိကန် အသံထွက်ဖြင့် နားထောင်နိုင်ပါပြီ။ အခမဲ့ ဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်များကို download လုပ်ပြီး စိတ်ကြိုက် ကူးယူ ဖြန့်ဝေနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး စီစဉ်သူများ၏ အမည်များကို ကျေးဇူးပြုပြီး ဖော်ပြပေးစေလိုပါသည်။ အသံဖိုင်များကို ဖြတ်တောက်ခြင်း ပေါင်းစပ်ခြင်းများ ပြုလိုပါက (09) 4500 56 130 ကို ဆက်သွယ် ခွင့်ပြုချက်ရယူစေလိုပါသည်။ ကုမ္ပဏီများမှ Sponsor ပေးပြီး CD ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ကျောင်းများကို ဖြန့်ဝေလိုပါကလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Distributed Free-of-Charge. This isaprivate project jointly organized by Strategy First Institute, Yinmar Music & Putet Comics to help Myanmar Education Reform initiatives. Recordings by Marc Gaulier, Studio: Ko Myat Min
If you wish to donate for the distribution of files in CDs to schools around the country, please contact us: (+95) 09 4500 56130. The contents maybe re-distributed in any format without alteration. Permission is not required as long as due credits are given to the organizers.
Download Grade6A picnic on the beach
Users who like Grade6A picnic on the beach
Users who reposted Grade6A picnic on the beach
Playlists containing Grade6A picnic on the beach
Groups containing Grade6A picnic on the beach
More tracks like Grade6A picnic on the beach